खाना र पकाउने | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: खाना र पकाउने
सुन्तला - उपयोगी गुण, उपचार, व्यंजनहरू
प्रकाशित 11.05.2021 11.05.2021
यी सिट्रस फलहरूको एक समृद्ध इतिहास र प्रयोग, उपचार, र खाद्य सेवन गर्दछ। सिट्रस फलहरूको राजा - सुन्तलाको बारेमा थप पत्ता लगाऔं!
पोर्क छाला रोल - बियर खाजा
प्रकाशित 22.04.2021 22.04.2021
के तपाइँ बियरको लागि स्वादिष्ट चाहानुहुन्छ, तर धेरै क्यालोरी खाजा चाहनुहुन्न? तरकारी रोल ठूलो छन्! र त्यस्ता तपाईका पाहुनाहरू, मानौं कि उनीहरूले यो कतै कोशिश गरेका छैनन्।
सुस्त कुकरमा prunes संग पोर्क - नुस्खा
यदि तपाईं एक असामान्य डिनर चाहनुहुन्छ भने, तर समय बचत गर्न र ढिलो कुकरमा खाना बनाउन चाहनुहुन्छ - prunes संग सुँगुर, तब तपाईंलाई के चाहिन्छ! सरल, सन्तोषजनक, स्वादिष्ट!
जो कोही ईस्टर चाखलाग्दो र विविध तरीकाले मनाउन चाहन्छ, नुस्खा हटाउनुहोस् - स्वादिष्ट, असामान्य - अविस्मरणीय!
हामी सबै बाल्यकालदेखि नै यसको बानी छौं, स्वादिष्ट, स्वस्थ, सजीव Okroshka। हामी पनि फेला पारौं - उनी कहाँबाट आएकी थिइन? यो कसरी उपयोगी छ? क्लासिक र मूल Okroshka को लागि व्यंजनहरु!
सुंगुरको कबाब रेसिपी घरमा
प्रकाशित 06.04.2021 06.04.2021
यस लेखमा, म घरमा बारबेक्यू बनाउनको लागि एक विधि साझा गर्दछु। के मासु लिने, कसरी समुद्रीकरण गर्ने र पकाउने। म किन तपाईंलाई सामान्य ईंटहरू पनि धातुको बारबेक्यु मन पर्छ, र खरानी कोइलामा काठ दाउराको बारेमा मनपर्दछु।
काबाब्सको सिजनका लागि: कोइलामा पाइक लुला - पकाउने विधि
यस नुस्खाको अनुसार, कोइलामा कोमल र रसदार लुला पाइकबाट मात्र तैयार गर्न सकिन्छ। अन्य नदी माछा पनि उपयुक्त छन्: पर्च, ठूलो रोच, कार्प। मुख्य कुरा ताजा फिललेट, राम्रो कम्पनी र राम्रो मुड हो!
सोया-मेयोनेज मरीनेडमा शीश कबाब
प्रकाशित 27.03.2021 27.03.2021
सहमत हुनुहोस् कि ग्रिसमा पकाइएका शीश कबाब एक धेरै लोकप्रिय र प्रिय हुन्। त्यहाँ यसको तयारीको लागि धेरै प्रकारका रेसिपीहरू छन्, र यस प्रकारका बीचमा कहिलेकाँही तपाईको स्वाद अनुरूप एकदमै राम्रो विकल्प फेला पार्न गाह्रो हुन्छ। आज हामी तपाईंलाई पोर्क शाश्लिक मसालेको साथ सोया-मेयोनेज मरीनेडमा मिलाइएको खाना पकाउँदछौं, धन्यवाद जुन यो सधैं रसदार, नरम हुन्छ र मलाई विश्वास गर्दछ, धेरै स्वादिलो।
चकलेट वेनिला ईस्टर नुस्खा
प्रकाशित 23.03.2021 03.04.2021
इस्टर केक को लागी एक उत्कृष्ट नुस्खा, स्वादिष्ट र असामान्य - यसले पेट र आँखाहरूलाई खुशी पार्नेछ!
प्रकाशित 22.03.2021 22.03.2021
प्रिय पाठकहरू, हामी तपाईंलाई नयाँ र, हाम्रो विचारमा, एक स्वादिष्ट ईस्टरको लागि सबैभन्दा सरल नुस्खाको साथ खुशी गर्न हतार गर्दछौं। घरेलु नुस्खाको अलावा, बर्षौं बर्षको प्रयास गरे पनि हामी तपाईंलाई ईस्टरको छुट्टी कसरी पूर्ण, समग्र, सबै उत्सवका मसीही उत्सवहरू अवलोकन गर्ने भनेर बताउनेछौं।
सिलिकॉन बेकिंग चटाई: चयन र केयर
प्रकाशित 12.01.2021 12.01.2021
सिलिकॉन रगहरू हालसालै फेसनमा आएका छन्, तर निश्चय पनि, तिनीहरूले दैनिक जीवनमा खाना पकाउँदो स्थानको गर्व लिएका छन्। सिलिकॉन म्याटहरू प्रयोग गर्न सजिलो छ र खाद्य ग्रेड सिलिकॉनबाट बनेको हो।
जवान बन्दकोबीको साथ चिकन सूप - एक सजिलो र स्वस्थ पहिलो पाठ्यक्रम
जवान सेतो गोभी संग भाँडा मात्र स्वादिष्ट, तर पनि स्वस्थ छन्। तरकारी धेरै भिटामिनहरूको स्रोत हो, साथ साथै पोटेशियम, जिंक, म्याग्नेशियम, फलाम, फ्लोराइड।
सुन्तला सॉसमा जडिबुटीको साथ चिकन ड्रमस्टिकहरू
प्रकाशित 12.01.2021 11.01.2021
यदि केही जडीबूटिहरू र सुन्तलाको चटनीको साथ भट्टीमा पकाइएको छ भने चिकन ड्रमस्टिकहरू धेरै रसिलो र बढी स्वाददायी हुन्छन्।
परिवार डिनर आइडिया: माछाको साथ आलु क्यासरोल
प्रकाशित 11.01.2021 03.04.2021
आलु र माछा ओभन क्यासरोलहरूको लागि उत्तम संयोजन हो। यसले खाना सिर्जना गर्न लामो समय लिन सक्दैन, त्यसैले यो सप्ताहको दिन र सप्ताहन्तमा परिवार डिनरको लागि उत्तम विचार हो।
माछाको अचार रूसी भोजनमा एक उत्तम होओओभर सूप हो। रेसिपी
छुट्टीको दिनहरूमा ह्या Hang्गओभर सूपहरू पहिले भन्दा बढि प्रासंगिक छन्। रसियाको पुरानो दिनमा, ह्या hang्गओभर केवल काक्राको अचारले मात्र हटाइएको थियो, तर यसमा अचार पनि पकाइएको थियो।
अचारको सेतो कोबीका लागि नुस्खा, जसले दाँतमा आश्चर्यजनक रूपले कुच्रिन्छ
प्रकाशित 07.01.2021 07.01.2021
अदुवाको बन्दकोबी सलाद को लागी अधिक उपयुक्त छ। काश, तपाईं यसमा गोभी सूप वा होजपज पकाउन सक्नुहुन्न, सउक्र्राउटको साथ। तर "सानो सेतो" को गिलाससहित स्नैकको लागि मसलाको साथ मरीनेट गरिएको, थोरै सुस्त र रसदार बन्दकोबी - त्यस्तै हो।
ओडेसामा सिपी कीरा - नुस्खा
ओडेसामा छुट्टीमा गएका कोही पनि कालो समुद्री सिपी कीराका विभिन्न किसिमका पक्राउहरू देखेर छक्क परे होलान्। निस्सन्देह, तिनीहरू सागरको भन्दा ठूलो छैनन्, तर तिनीहरू पनि धेरै स्वादिष्ट र स्वस्थ छन्। भाँडा ...
स्पाइस बेर केक रेसिपी
यस बेर केकमा नरम आटा हुन्छ, मसलादार स्वादले रसीलो भरिन्छ जुन दालचीनी र अदुवाबाट आउँछ। सुगन्धित र रमणीय पेस्ट्रीहरू, पूरक लिनु असम्भव छ! बेर पाई सामग्री - रेसिपी ...
रास्पबेरी मौसमको समयमा, धेरै गृहिणीहरूले फ्रिजरमा स्वस्थ बेरीहरू पठाउँछन् - जाडो नभएसम्म भण्डारणको लागि। स्टकबाट, तपाईं एक धेरै स्वादिष्ट रक्सी तयार गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईं छुट्टिहरूमा लिप्त हुन सक्नुहुन्छ। पेय बाहिर जान्छ ...
चिप्स वा मासुको लागि3सॉस
प्रकाशित 02.10.2019 02.10.2019
एपेटाइजर सॉसको विविधता बीच, यी तीनहरू मेरो मनपर्ने छन्। मँ तिनिहरु मध्ये सँधै मासु, कुखुरा, घरेलु वा किन्दा चिप्स, पास्ता, पिटा रोटी र अधिकको लागि पकाउँछु। साँच्चै, ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ 645 अर्को पाना
58 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 1,156 प्रश्नहरू।